Twitter: Autofollow zvichibva panzvimbo | Martech Zone
Svondo, Zvita 29, 2013 Svondo, Zvita 29, 2013 Douglas Karr
Kuve ese ari maviri neruzhinji kutaurirana svikiro, mabhizinesi anogona kutora mukana we Twitter kukura yavo yekutengesa traffic - zviri nyore kupfuura zvinofunga vazhinji. Vashandisi veTwitter vese vanoshanda uye vanotaura nezve kwavari uye zvavari kuita. Nekutevera vanoshanda veTwitter vashandisi mudunhu, makambani anovimba nemuno bhizinesi anogona kuwedzera yavo yakananga traffic pamwe nekukurisa yavo brand online.
Realtors, zvitoro zvemuno, mabhawa, makirabhu, vamiriri veinishuwarenzi… kana chero rimwe bhizinesi rinotyaira bhizinesi zvichienderana nenzvimbo inogona kubatsirwa nekutevera nekuvandudza hukama nevashandisi veTwitter kutenderedza bhizinesi ravo. Rimwe bhenefiti rakawedzerwa nderekuti vanhu ava vanowanzogovana mafoto, mavhidhiyo uye zvigadziriso - kwete paTwitter chete, asi mune mamwe masocial network uye zvinoshandiswa.
Tweet Adder uchawana vanoshandisa twitter nenzvimbo mukati memakiromita gumi, makumi maviri nemashanu, makumi mashanu mamaira, kana zana mamaira eipi zip kodhi, kuendesa kunze, iyo inotumira auto inotevera. Tweet Adder awana izvo kusvika 56% vanokutevera kumashure - kupa mukana wekuti vatange hukama hwako hwehukama. Zvakare, ivo vanogona kutanga kupindura uye kunyangwe kudzoreredza zvaunovandudza!
Kuzivisa: Icho chinongedzo chekubatana!
Tags: autofollowmufamboGeolocationradiustweet inowedzeratweetadderTwitteruri chinhambwe
Yakareba-Fomu Yemukati Kushambadzira